/ Products / MaR & D Reagents / Dolastatin 10 (110417-88-4)
Rating: SKU: 110417-88-4. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatsira uye unyanzvi hwekugadzira kubva ku gram kusvika mukurongeka kweDolastatin 10 (CAS 110417-88-4), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Molecular Kurema: 785.09g / mol
Storage Temp: Chengetedza munzvimbo inotonhorera uye yakaoma uye pa0 - 4 ℃ yenguva pfupi (mazuva kusvika kumavhiki) kana -57 ℃ kwenguva yakareba (mwedzi kusvika makore)
Color: Yakachena kusvika pane-white sollid
II. Dolastatin 10 (110417-88-4) kushandiswa muhutano
2.Dolastatin 10 Ushumiri:
Chinangwa: Nyanzvi yezvokurapa yakatsvaga kubudirira uye kuora kwezwi inoita anti-microtubule agent dolastatin-10 kune varwere vane kenza yepamusoro yepamu.
Nzira: Makumi makumi maviri nemana varwere vane kenza inogona kuenzaniswa yekaseti yemasasa yakarapwa ne dolastatin-10 pachirwere che 400 mcg / m2 neine muchengeti wepirus kamwe mushure mavhiki e3.
Migumisiro: Mumwe kubva kune vane 21 (5%; 95% CI: 0-24%) akawana kuregererwa kwekanguva kwemazuva e113. Varwere vana vakachengetedza zvirwere zvakagadzikana zvemazuva mashoma e87. Varwere vakagamuchira miviri miviri ye dolastatin-10. Hematologic toxicity yakanga yakaenzanisa, nevarwere ve8 varikugadzira grade 4 neutropenia, uye 5 neklasi 3 neutropenia; rimwe kirasi 3 febrile neutropenia yakaonekwa. Izvi zvikamu zvegadziriro 3 uye 4 neutropenia zvakagadzirirwa pa 36% yemishonga yekurapa. Non-hematologic toxicity yakanga isingawanzoitiki.
Mhedziso: Kunyange zvazvo chinyorwa chetsvina che dolastatin-10 chakanga chichigamuchirwa, chakanga chine basa shoma mukudzidza kwekenza yepamusoro ino.
In Vitro: Dolastatin 10 inokosha yepentapeptide iyo yakatarwa kubva kugungwa muDolala kuricularia. Inowanikwa kuti idzi in vitro data dzakangofanana neyaDolastatin 10 neArgistatin PE, imwe neimwe iyo ine GI50 inokosha ye 10-5-10-6 μg / mL (10-2-10-3 nM) nechinangwa chakafanana minipanel of human cell lines. The antibody-drug conjugate (ADC) inosanganisira anti-CD30 monoclonal antibody cAC10 inogadziriswa ku cytotoxic mujeri monomethyl auristatin E (MMAE), analog inogadzirwa ye tubulin polymerization inhibitor Dolastatin 10 (110417-88-4).
3.Zvava pane Dolastatin 10
Ichi chigadzirwa ndechokutsvakurudza kushandiswa chete, kwete kwevanhu kana zvekushandiswa kwemhuka.
Kuti uwane kuvhara kwepamusoro, tapota furai tube mu 37 ℃ uye muizunungure muwaini ye ultrasonic kwekanguva.Solution solution inogona kuchengetwa pasi -20 ℃ kwemwedzi inoverengeka.
Zvose zvakaitwa neDolastatin 10 (110417-88-4) yakapedzwa nekuvandudza kushandiswa kwakanaka kwezvinhu zviviri zvinokosha ma-amino acid components, Dil (6) uye Dap (11), uye kuwirirana kwechikamu chechikamu chechikamu chemaamino acid kubva kuC-terminal Doe .
Synthesis uye Kuongorora kweDotlastatin 10 Analogues Inosanganisira Heteroatoms paAmino Acid Side Chains.
Shanduro dzakasiyana-siyana dzekuzvarwa dzinoita dolastatin 10 dzinofarira zvikuru kenza nekuda kwezvakawanda zvebasa ravo rekuita uye kushandiswa kwadzo sekubhadhara mu anti anti-drug conjugates (ADCs). Kugadziriswa kwe dolastatin 10 core scaffold yakanyanya kunyanya kugadziriswa kweP1, N-terminus, neP5, C-terminus, isina kunyanya kutarisa pasi peP2.
Muchiedza chemashure, Dolastatin 10 (110417-88-4) inoratidzira basa kune rimwe ropa revanhu, lymphoma uye yakasimba tumor cell lines (yakadai seOVCAR-3 neNSCLC) neIncxNUMX mitemo kubva 50nM kusvika 0.1nM. Iko zvino yakaedzwa mumakiriniki.
IV. How kutenga Dolastatin 10 kubva AASraw?